Waa kuma safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhin doona Washington? – Radio Daljir
Luulyo 17, 2019 8:52 b 0
Amb. Cali Shariif Axmed ayaa loo magacaabay inuu noqdo safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhin doona Washington, waxaana uu noqonayaa safiirkii 3aad oo muddo afar sano gudahood ay si rasmi ah dowladda Soomaaliya u magacawdo Mareykanka.
Cali Shariif ayaa horay u soo noqday Safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalka Itoobiya oo muddo todobo bilood ahaa iyo Safiirka Soomaaliya ee dalka Faransiiska.
Waxaa la filayaa in maalmaha soo socda uu u ambabaxo dalka Mareykanka, si kaalinta Danjirnimo ee muddo bannaanaa uu u buuxiyo.
Tan iyo horaantii sanadkii 2018 xilka Safiirnimo ee magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa ahaa mid bannaanaa, kaddib markii Safiirkii xilkaas hayay Axmed Ciise Cawad loo magacaabay Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya.